Diiwaan-galinta musharaxiinta guudoonka Baarlamaanka DGKG oo maanta bilaabansa | wardeeqnews News Online News
Diiwaan-galinta musharaxiinta guudoonka Baarlamaanka DGKG oo maanta bilaabansa
Labadii maalin ee la soo dhaafay waxa ka socday magalaada Baydhabo qaban qaabada doorashada Gudoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed. Sida ku qoran jadwalka doorashada Maanta ayaa la filayaa in Magaalada Baydhabo ee Caasimadda KMG ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka bilaabao Diiwaan-gelinta Musharaxiinta u tartameysa xilka Guddoonka Baarlamaanka labaad ee maamulkaas
Dhawaan ayaa ay ahayd markii Guddiga Doorashada ay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in maalina Axada la bilaabayo diiwaan-gelinta Musharaxiinta xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen ayna ku egtahay maalinta berri. Sidoo kale Guddiga ayaa qoraalkooda ku sheegay in 31 Bishaan la dhageysan doono Khudbadaha ay jeedinayaan Musharaxiinta u tartameysa xilka Guddoonka Baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya magalaada Baydhabo Guddiga Doorashada ayaa maanta dardar galinayay howlihii ugu dambeeyay oo ku bilaabayan diiwaan-gelinta Musharaxiinta kala duwan, waxaana la filayaa in inta badan la diiwaaan geliyo xubnahaas. Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa waxaa lagu wadaa in Maalinta Arbaca ah ee soo socota ay ka dhacdo Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa la filayaa in doorashada Gudoonka in uu ku soobaxao shaqsi uu wato Maxamed Cabdullahi Farmaajo, kaas oo ah Cali Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub kana soo jeedo beesha Tuni. Doorashada Gudoonka Baarlamaanka ayaa ah mid madadaalo ah, go’aanka cida gudoomiyaha noqonaysa horay ayaa loo gaaray.
Article horeCiidanka dowlada oo sheegtay in weerar gaadmo ah ay ku dileen Al Shabaab
Article soo socdaCiidamada Amniga ee Magalada Dhusamareeb oo gacanta loo galiyay Gacanku dhiigle